सरकार कुन बेला ढल्ने ठेगान नभएको भन्दै ओलीले गरे भटाभट नियुक्ति - Media Dabali
सरकार कुन बेला ढल्ने ठेगान नभएको भन्दै ओलीले गरे भटाभट नियुक्ति
काठमाडौं - राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुन बेला ओली सरकार ढल्ने हो ? निश्चित छैन । एमालेमा देखिएको किचलोले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद जुनसुकै बेला जान सक्ने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम तयारी भएको र विश्वासको मत लिनेबेला ओलीले कारबाही गरेका माधव पक्षका सांसद संसदमा उपस्थित नभएमा प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
सोही कारण आज शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर ओलीले भटाभट आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन् । आज नियुक्ति पाउने सबै एमाले कार्यकर्ता हुन् ।
शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा डा. किरण पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । समितिका सदस्यहरुमा अवकाश प्राप्त सहायकरथी बाबुकृष्ण कार्की, डा. सुस्मिता ढकाल, शशी शर्मा र भेषराज आचार्य बरुण नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बोर्ड अध्यक्षमा लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गरेको छ । बोर्डको अध्यक्ष बन्न तीनजनाको आवेदन परेको थियो ।
आवेदन दिनेमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी, रमेशकुमार खड्का र लक्ष्मण हुमागाईं थिए । काभ्रेका हुमागाई सुरुमा राजावादी थिए । नेपाल टेलिभिजनमा हुँदा उनले राजावादी रमा सिंहलाई निकै सहयोग गरेका थिए । पछि उनले एमाले बनेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फागुन २० गते सूचना जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञापन बोर्डमा यसअघि नै सदस्यहरुको नियुक्ति भइसकेको छ ।